ကွယ်လွန်သူရဲ့လိပ်ပြာကို ပြန်ခေါ်သူ ရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက် - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / ကွယ်လွန်သူရဲ့လိပ်ပြာကို ပြန်ခေါ်သူ ရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်
ကွယ်လွန်သူရဲ့လိပ်ပြာကို ပြန်ခေါ်သူ ရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်
Apann Pyay 10:25 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ကျွန်မတို့မိသားစုမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်မ တို့ခြံ (အခုတော့ ကန်ထရိုက်တိုက်) က တာမွေမြို့နယ် ကျိုက်က္ကဆံဘောလုံးကွင်းနဲ့ကပ်ရပ်မှာရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အဖိုးကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့မင်းသားပေါ့ ။ အဖိုးကအလုပ် အရမ်းလုပ်သူပါ… အိမ်မှာလဲ ဆေးပြင်းလိပ်ခုံထောင်ထားသလို ဇတ်ပွဲကန်ထရိုက်လည်းလုပ်ပါတယ်… မိသားစုကို သံယောဇဉ်ကြီးသလို ပျော်ပျော်လည်းနေတတ်သူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာက အဖိုးကို ကုသမရတဲ့ကင်ဆာရောဂါကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ကဲ…လိုက်ချင်တဲ့သူတွေလိုက်ခဲ့ကြ ငါ့အဘ တစ်ယောက်ထဲပျင်းနေမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး “ပြောပြီးခေါ်လာသတဲ့ အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ မိသားစုတွေမသ်ိလိုက်ပါဘူး။ အဖိုးကလူချစ်လူခင်ပေါတော့နာရေးမှာ လူစီခဲ့သလို အိမ်မှာလဲ သတင်းလာမေးသူတွေနဲ့အလွန်ကိုစည်ကားနေပါတယ်… အဲ…. ၇ ရက်ပြည့်တဲ့ရက်လည်ညမှာတော့ အိမ်မှာမိသားစုဝင် တွေနဲ့ အလုပ်သမား ၂ ယောက်လောက်ပဲအိမ်မှာရှိတော့တယ်။ ၁၂နာရီထိုးတဲ့အထိ နေရမှာဆိုတော့ မိသားစုတွေ ဖဲရိုက်ရင်းစောင့်မယ်ပေါ့။ အဲ…အဲ့မှာစတွေ့တော့တာပဲ… ၀ိုင်းစတည်တုန်းရှိသေးတယ်.. အိမ်တံခါးမကြီးမှာချိတ်ထားတဲ့ သော့ခလောက်အကြီးကြီးက သူဘာသာသူ လှုပ်နေတာကို တံခါးကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်တဲ့ ကျွန်မတို့ဘကြီးကစမြင်ပါလေရော… အဘ ကအားလုံးကိုသတင်းပေး အားလုံးလည်းပူးကပ်ပြီး တံခါးကိုမျက်နှာမူထိုင်လိုက်တော့ သော့လှုပ်တာက ပိုကြမ်းလာပြီး တံခါးကိုလည်း တစ်ယောက်ယောက်ကကိုင်လှုပ်နေသလို တ၀ုန်းဝုန်း တဒိုင်းဒိုင်းဖြစ်နေတော့ အမေက နင်တို့ အဖိုးနင်တို့ကို နှုတ်ဆက်နေတာလို့ ပြောနေတုန်းမှာပင် နောက်ဖေးကနေရေချိုးနေသံကြားပြန်ရောလေ…
နောက်မီးဖိုချောင်မှာ ခုံဖိနပ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေသံ တဒေါက်ဒေါက်ကိုလည်းထပ်ကြားနေပြန်ရော… ကျွန်မတို့မိသားစုလည်းကြောက်လွန်းလို့ အသားတွေလည်းတုန် ချွေးတွေးလည်းပြန်… ဘုရားစာတွေရွတ်တာလည်း ကပြောင်းကပြန်တွေဖြစ်နေတုန်းမှာအိမ်ရဲ့ဘေးနံရံတွေကို လူအယောက် ၂၀ လောက်ဝိုင်းထုနေသလို တ၀ုန်းဝုန်းထုကြပါတယ်… ကျွန်မတို့ လည်းကြောက်လိုက်တာမှ လိပ်ပြာလွှင့်မတတ်ပါပဲ။ အဲခံစားချက်က ဒီတစ်သက်မေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလည်း မိုးမြန်မြန်လင်းစေချင်နေပါတော့တယ်။ အရင်ကဆို ကျောင်းတက်ရမှာပျင်းလို့ မိုးမြန်မြန်မလင်းစေချင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ ရသမျှဘုရားစာတွေဝိုင်းကြရင်း အသံတွေလည်းကြားရင်းနဲ့ မနက်လင်းသွားပါတယ်… အလင်းရောင်ရတော့ အသံတွေအားလုံးက ညကသူမဟုတ်ခဲ့သလိုပါပဲ။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့။
အိမ်ကလူကြီးတွေလည်း ကျွန်မတို့မိသားစုကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းဘုန်းကြီးကိုသွားပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်း ကြွလာတော့ အိမ်ဝရောက်ရောက်ချင်း အိမ်ထဲကိုမလာသင့်တဲ့ ဧည့်သည်တွေရောက်နေတာပဲလို့… မိန့်တယ်..
ပြီးတော့ မနေ့ကလိပ်ပြာပြန်ခေါ်လာတာ ဘယ်သူလည်းလို့မေးတော့ အလုပ်သမားအကိုကြီးက သူပါလို့ပြောတယ်… အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းက ဒါကာ ဘယ်လိုပြောပီးပြန်ခေါ်လာတာလည်းလို့မေးတယ်…
အကိုကြီးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ပြန်ပြောပြတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုလည်းတအံ့တသြပေါ့။ ဘုန်းဘုန်း က မိန့်တယ်… သရဲအကောင် ၂၀ ထက်မနည်းပါလာတယ်တဲ့လေ…
နှစ်ချို့သရဲကြီးတွေလည်းတွေလည်း ပါတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ဘုရားစာရွတ်လည်းမရခဲ့တာပေါ့…။ ဘုန်းဘုန်း ကထပ်မိန့်တယ်… သူတို့က ခြံထဲက သရက်ပင်ကို အမှီပြုတော့မှာတဲ့… အမေလည်း အဲဒါဆို တပည့်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လျှောက်တော့ ဘုန်းဘုန်းက ညနေခြံထဲမှာ ပရိတ်ရွတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရန်မိန့်ပြီးတော့ ပြန်ကြွသွားပါတယ်။ ညနေ ၄ နာရီလောက်ကျတော့ သူတို့လည်း ဇာတ်လမ်းပြန်စပြီး အသံပလံတွေစပေးပါတော့တယ်…
ဘုန်းဘုန်းကြီး က ပရိတ်ရေတွေကို သရက်ပင်ကိုသွားလောင်းပါတယ်။ နောက်တော့ ဒါကာ ဒါကာမ တို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ အားလုံးသူနေရာသူပြန်သွားပါပီ ။ ဒီညအေးအေးချမ်းချမ်းအိပ်လို့ရပါပြီ လို့မိန့်ပီးပြန်ကြွသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်မတို့အကြောက်အရှိန်မသေပဲ တစ်ညလုံးမအိပ်နိုင်ကြပါဘူး ။ သို့သော် ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါ… အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။
အလုပ်သမားအကိုကြီးကလည်း အဖေ အမေတို့ ကိုတောင်းပန်ပါတယ်… သူ အဲလို မရည်ရွယ်ကြောင်း နောက်ပြောင်ရုံသက်သက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း.. တောင်းပန်ခဲ့ သလို ကျွန်မမိဘတွေကလည်း လူငယ်မို့ဖြစ်တာပဲလေဆိုပြီး ဗွေမယူခဲ့ပါဘူး။ ထူးဆန်းတာက မနက်ကျတော့ ပရိတ်ရေလောင်းခဲ့သရက်ပင်ကြီးက မနေ့ကပဲ အရွက်အလက်တွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာရှိရာကနေ ညတွင်းချင်းမှာပဲ မီးရှို့ထားသလို တစ်ပင်လုံးမဲခြောက်လို့နေပါတော့တယ်……….။ ။ ။
Credit: ပရလောက၏ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရပ်များ
ဒီဇာတျလမျးလေးက ကြှနျမတို့မိသားစုမှာတကယျဖွဈခဲ့တာပါ။ ကြှနျမ တို့ခွံ (အခုတော့ ကနျထရိုကျတိုကျ) က တာမှမွေို့နယျ ကြိုကျက်ကဆံဘောလုံးကှငျးနဲ့ကပျရပျမှာရှိပါတယျ။ ကြှနျမတို့ အဖိုးကတော့ ဒီဇာတျလမျးလေးရဲ့မငျးသားပေါ့ ။ အဖိုးကအလုပျ အရမျးလုပျသူပါ… အိမျမှာလဲ ဆေးပွငျးလိပျခုံထောငျထားသလို ဇတျပှဲကနျထရိုကျလညျးလုပျပါတယျ… မိသားစုကို သံယောဇဉျကွီးသလို ပြျောပြျောလညျးနတေတျသူပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကံကွမ်မာက အဖိုးကို ကုသမရတဲ့ကငျဆာရောဂါကို ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဇာတျလမျးကတော့ အဖိုးအသုဘမွခေတြဲ့ရကျမှာစတာပါ။ မွခေတြဲ့ရကျမှာ မိသားစုဝငျထဲမှာ ယောကျြားလေးတှရှေိပမေဲ့ အားလုံးကသောကအပူတှနေဲ့ဆိုတော့ အဖိုးလိပျပွာပွနျချေါဖို့ ကိုသတိမရကွဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အဖိုးရဲ့ဆေးလိပျခုံ အလုပျသမားအကိုကွီးတဈယောကျက လိပျပွာပွနျချေါခဲ့ပါတယျ။ သူကအငျမတနျ အစအနောကျသနျတယျလေ။ လိပျပွာချေါတော့လညျး သူ့အကငျြ့ကဖြောကျမရဘဲ အဖိုးနာမညျနဲ့ လိပျပွာကိုကောငျးကောငျးမချေါဘဲ
“ကဲ…လိုကျခငျြတဲ့သူတှလေိုကျခဲ့ကွ ငါ့အဘ တဈယောကျထဲပငျြးနမှောစိုးလို့ ဆိုပွီး “ပွောပွီးချေါလာသတဲ့ အဲ့ဒါကိုကြှနျမတို့ မိသားစုတှမေသျိလိုကျပါဘူး။ အဖိုးကလူခဈြလူခငျပေါတော့နာရေးမှာ လူစီခဲ့သလို အိမျမှာလဲ သတငျးလာမေးသူတှနေဲ့အလှနျကိုစညျကားနပေါတယျ… အဲ…. ၇ ရကျပွညျ့တဲ့ရကျလညျညမှာတော့ အိမျမှာမိသားစုဝငျ တှနေဲ့ အလုပျသမား ၂ ယောကျလောကျပဲအိမျမှာရှိတော့တယျ။ ၁၂နာရီထိုးတဲ့အထိ နရေမှာဆိုတော့ မိသားစုတှေ ဖဲရိုကျရငျးစောငျ့မယျပေါ့။ အဲ…အဲ့မှာစတှတေ့ော့တာပဲ… ၀ိုငျးစတညျတုနျးရှိသေးတယျ.. အိမျတံခါးမကွီးမှာခြိတျထားတဲ့ သော့ခလောကျအကွီးကွီးက သူဘာသာသူ လှုပျနတောကို တံခါးကိုမကျြနှာမူပွီးထိုငျတဲ့ ကြှနျမတို့ဘကွီးကစမွငျပါလရေော… အဘ ကအားလုံးကိုသတငျးပေး အားလုံးလညျးပူးကပျပွီး တံခါးကိုမကျြနှာမူထိုငျလိုကျတော့ သော့လှုပျတာက ပိုကွမျးလာပွီး တံခါးကိုလညျး တဈယောကျယောကျကကိုငျလှုပျနသေလို တဝုနျးဝုနျး တဒိုငျးဒိုငျးဖွဈနတေော့ အမကေ နငျတို့ အဖိုးနငျတို့ကို နှုတျဆကျနတောလို့ ပွောနတေုနျးမှာပငျ နောကျဖေးကနရေခြေိုးနသေံကွားပွနျရောလေ…
နောကျမီးဖိုခြောငျမှာ ခုံဖိနပျနဲ့လမျးလြှောကျနသေံ တဒေါကျဒေါကျကိုလညျးထပျကွားနပွေနျရော… ကြှနျမတို့မိသားစုလညျးကွောကျလှနျးလို့ အသားတှလေညျးတုနျ ခြှေးတှေးလညျးပွနျ… ဘုရားစာတှရှေတျတာလညျး ကပွောငျးကပွနျတှဖွေဈနတေုနျးမှာအိမျရဲ့ဘေးနံရံတှကေို လူအယောကျ ၂၀ လောကျဝိုငျးထုနသေလို တဝုနျးဝုနျးထုကွပါတယျ… ကြှနျမတို့ လညျးကွောကျလိုကျတာမှ လိပျပွာလှငျ့မတတျပါပဲ။ အဲခံစားခကျြက ဒီတဈသကျမနေို့ငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျမစိတျထဲမှာလညျး မိုးမွနျမွနျလငျးစခေငျြနပေါတော့တယျ။ အရငျကဆို ကြောငျးတကျရမှာပငျြးလို့ မိုးမွနျမွနျမလငျးစခေငျြခဲ့ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ ရသမြှဘုရားစာတှဝေိုငျးကွရငျး အသံတှလေညျးကွားရငျးနဲ့ မနကျလငျးသှားပါတယျ… အလငျးရောငျရတော့ အသံတှအေားလုံးက ညကသူမဟုတျခဲ့သလိုပါပဲ။ တိတျဆိတျငွိမျသကျလို့။
အိမျကလူကွီးတှလေညျး ကြှနျမတို့မိသားစုကိုးကှယျတဲ့ဘုနျးဘုနျးကွီးကိုသှားပါတယျ။ ဘုနျးဘုနျး ကွှလာတော့ အိမျဝရောကျရောကျခငျြး အိမျထဲကိုမလာသငျ့တဲ့ ဧညျ့သညျတှရေောကျနတောပဲလို့… မိနျ့တယျ..
ပွီးတော့ မနကေ့လိပျပွာပွနျချေါလာတာ ဘယျသူလညျးလို့မေးတော့ အလုပျသမားအကိုကွီးက သူပါလို့ပွောတယျ… အဲ့တော့ဘုနျးဘုနျးက ဒါကာ ဘယျလိုပွောပီးပွနျချေါလာတာလညျးလို့မေးတယျ…
အကိုကွီးက ဖွဈကွောငျးကုနျစဉျပွနျပွောပွတယျ။ ကြှနျမတို့ မိသားစုလညျးတအံ့တသွပေါ့။ ဘုနျးဘုနျး က မိနျ့တယျ… သရဲအကောငျ ၂၀ ထကျမနညျးပါလာတယျတဲ့လေ…
နှဈခြို့သရဲကွီးတှလေညျးတှလေညျး ပါတယျလေ။ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျမတို့ဘုရားစာရှတျလညျးမရခဲ့တာပေါ့…။ ဘုနျးဘုနျး ကထပျမိနျ့တယျ… သူတို့က ခွံထဲက သရကျပငျကို အမှီပွုတော့မှာတဲ့… အမလေညျး အဲဒါဆို တပညျ့တျောတို့ ဘယျလိုလုပျရမလဲ လြှောကျတော့ ဘုနျးဘုနျးက ညနခွေံထဲမှာ ပရိတျရှတျဖို့ပွငျဆငျထားရနျမိနျ့ပွီးတော့ ပွနျကွှသှားပါတယျ။ ညနေ ၄ နာရီလောကျကတြော့ သူတို့လညျး ဇာတျလမျးပွနျစပွီး အသံပလံတှစေပေးပါတော့တယျ…
ကြှနျမတို့မိသားစုလညျးရှိ ရှိသမြှအမြိုးတှခေျေါ ပရိတျရှတျဖို့ပွငျဆငျကွနဲ့ အလုပျရှုတျနတော သူတို့ကိုတောငျ အခြိနျပေးပွီးမကွောကျနိုငျတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ညနေ ၅ နာရီလောကျကတြော့ ဘုနျးဘုနျးအပါအဝငျ နောကျဘုနျးဘုနျး ၃ ပါးကွှလာပါတယျ ။ပရိတျစရှတျတော့ အိမျထဲမှာလမေုနျတိုငျးကသြလို အသံတှဆေူညံပှကျလောရိုကျနပေါတော့တယျ။ အစမှာ အဲလိုဆူညံပမေဲ့ နောကျတဖွညျးဖွညျးတိုးသှားပွီး အမြှချေါတဲ့ အခြိနျမှာတော့လုံးဝငွိမျသကျတိတျဆိတျသှားပါတယျ။
ဘုနျးဘုနျးကွီး က ပရိတျရတှေကေို သရကျပငျကိုသှားလောငျးပါတယျ။ နောကျတော့ ဒါကာ ဒါကာမ တို့မစိုးရိမျပါနဲ့ အားလုံးသူနရောသူပွနျသှားပါပီ ။ ဒီညအေးအေးခမျြးခမျြးအိပျလို့ရပါပွီ လို့မိနျ့ပီးပွနျကွှသှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကြှနျမတို့အကွောကျအရှိနျမသပေဲ တဈညလုံးမအိပျနိုငျကွပါဘူး ။ သို့သျော ဘာမှထူးခွားမှုမရှိပါ… အေးအေးခမျြးခမျြးပါပဲ။
အလုပျသမားအကိုကွီးကလညျး အဖေ အမတေို့ ကိုတောငျးပနျပါတယျ… သူ အဲလို မရညျရှယျကွောငျး နောကျပွောငျရုံသကျသကျပွောခဲ့တာဖွဈကွောငျး.. တောငျးပနျခဲ့ သလို ကြှနျမမိဘတှကေလညျး လူငယျမို့ဖွဈတာပဲလဆေိုပွီး ဗှမေယူခဲ့ပါဘူး။ ထူးဆနျးတာက မနကျကတြော့ ပရိတျရလေောငျးခဲ့သရကျပငျကွီးက မနကေ့ပဲ အရှကျအလကျတှနေဲ့ ဝဝေဆောဆာရှိရာကနေ ညတှငျးခငျြးမှာပဲ မီးရှို့ထားသလို တဈပငျလုံးမဲခွောကျလို့နပေါတော့တယျ……….။ ။ ။
( အခုလို ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးလေးကို ပွောပွပေးခဲ့တဲ့ မစူးငယျကို ကြှနျတျောတို့ Admin မြားကိုယျစား ကြေးဇူးအထူးတငျရှိရပါတယျ ခငျဗြာ )
Credit: ပရလောက၏ သညျးထိတျရငျဖို ဖွဈရပျမြား